novembre 2014 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Izay no anazavana anazy alohan’ny hidirantsika amin’ny tenin’Andriamanitra satria ao amin’ny taona litorjika dia ilaina ny ahafantarana an’io sao dia anontanian’ny olona isika hoe ny anareo katôlika 34 ny herinandro nefa ny anay 52. Manomboka amin’ny herin’ny anio dia efa tsy isaina, esorina ny “Avent” izay misy alahady 4 eo. Aorian’izay ny fankalazana ny fetin’ny Noely, dia efa mialaizay, misy herinandro 4 eo. Aorian’izay koa, ny Karemy izay 40 andro, izany hoe herinandro maromaro koa tsy isaina. Ary aorian’ny Paka dia misy herinandro 7 be izao mitohy ny fankalazana ny fitsnaganan’I Jesoa ho velona. Ireo izany dia miala avokoa. Ary izany no mahatonga hoe 34 ny herinandro mandavan-taona. Ilaina ny mba ahafantarantsika an’izay satria ho anareo mpianatra katesizy na ho antsika kristianina tsotra, maro no tsy mahafantatra an’izany akory. Fa tapitra eo amin’ny herinandro faha-34, izay androany, tapitra ny taonan’ny fiangonana. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 23/11/2014 – Toriteny
Hipetraka eo ambony seza fiandrianan’ny voninahiny Izy, ary hanavaka azy ireo. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 23/11/2014 – Tenin’Andriamanitra
Ny tiako hisarihana ny saintsika amin’ity anio ity dia ny maha-fiangonana maneran-tany ny fiangonana katôlika. Androany ny fiangonana dia mankalaza ny nanorenanany fiangonana Basilique tao Frantsa. Rehefa nandalo fotoan-tsarotra ny fiangonana katôlika nandritra ny 300 taona, izany hoe, teo ny fanenjehana isan-karazany dia nisitrika tany an-tranon’olona na tany anaty fasana. Tany ny katôlika, izany hoe ireo zokintsika ara-pinoana no nivavaka, fa tsy sahy niseho masoandro noho ny tahotra izay fanenjehana maro isan-karazany izay. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 09/11/2014 – Toriteny
Vakiteny voalohany: Bokin’i Ezekiela Mpaminany (Ez 47, 1-2.8-9.12)
Tamin’ izany andro izany, dia nentin’ny Anjely niverina ho eo amin’ny varavaran’ny trano indray aho. Ary indro nisy rano nivoaka avy ao ambanin’ny tokonan’ny trano, amin’ny lafiny atsinanana, fa nitodika niantsinanana ny anoloan’ny trano; ka nidina ny rano avy ao ambanin’ny lafitrano ankavanana tao atsimon’ny ôtely. Nentiny nivoaka tamin’ny alo-baravarana avaratra aho, dia nasainy nanodidina eo ivelany aho mandra-pahatonga eo amin’ny alo-baravarana ivelany mitodika miantsinanana; ka indro ny rano nandeha tamin’ny lafiny ankavanana.Hoy izy tamiko: “Ity rano ity dia mandeha mankany amin’ny faritany atsinanana; hidina ho any amin’ny tany lemaka vao hiditra ho ao amin’ny ranomasina; hoentina mankany amin’ny ranomasina izy, dia ho tonga mahasalama ny rano.Ny zava-manan’aina mihetsiketsika any amin’izay halehan’ny ony roa na aiza na aiza, ho velona avokoa, ka ho be dia be ny hazandrano; satria raha vao tonga any ity rano ity dia ho tonga mahasalama ny ranomasina, ary hahavelona avokoa izay halehan’ny ony maria.Eo akaikin’ny ony, amin’ny morony andaniny avy, hisy hazo mamoa isan-karazany haniry, ka ny raviny tsy mba halazo, ary ny voany tsy mba hitsahatra. Hamoa voa vaovao isam-bolana izy, satria hivoaka avy ao amin’ny fitoerana masina ny ranony; ny voany ho fihinana tsara, ary ny raviny ho fanasitranana tsara.
Vakiteny faha-2: Taratasy Voalohan’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (1 Kôr 3, 9b-11.16-17)
Tempolin’ Andriamanitra ianareo
Ry kristianina havana, trano arafitr’ Andriamanitra ianareo. Noho ny fahasoavana nomen’Andriamanitra ahy, dia nanao ny fanorenana toy ny tompo-marika mahay aho, ary ny hafa kosa mandrafitra eo amboniny. Samia anefa mitandrina izay arafiny eo amboniny; satria tsy misy mahazo manao fanorenana hafa, afa-tsy izay efa vita, dia i Jesoa Kristy. Tsy fantatrareo va fa Tempolin’ Andriamanitra ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny Fanahin’Andriamanitra? Koa izay mandrava ny tempolin’Andriamanitra dia mba horavan’Andriamanitra kosa, satria masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 2, 13-22)
Ny Vatany no Tempoly nolazainy. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 09/11/2014 – Tenin’Andriamanitra
Manome tsiny antsika ny olona hafa: “fa maninona ianareo katôlika no mivavaka ho an’ireo olona efa maty? Fa angaha ireny mbola maheno?Ny asa nataony tety an-tany, dia ireny ihany no atrehiny rehefa miakatra arak any bokin’ny aoôkalipsa, ka tsy ilaina intsony ny mivavaka ho an’ny maty.Izay no ataon’ny olon-kafa amintsika katôlika. Ary hitantsika ny olon-kafa, na ny protestanta rehefa mitondra ny havany any am-piangonana rehefa maty, dia inona no ao an-tsainy? Ho azy, dia tsy mivavaka ho an’ny maty fa fampionona ho an’ny velona, ka atao izay hampangotsokotsoka ny manam-pahoriana amin’iny fotoana iny, atao izay hampitomany azy. Fanaontsika moa ny hoe tsy hamendrofendra fa vao manika mamendrofendro an’ireo manam-pahoriana isika; tsy hamoha fota-mandry hoy isika, nefa ianao mampatsiaro ny zavatra efa niainany teo aloha, mampilatsaka ny ranomason’ny olona. Ka ho an’ny hafa dia izay no ataony, ka rehefa latsaka ny ranomason’ny olona nampangotsohana ao am-piangonana dia izay no mahafaly ily mpitarika ny vavaka. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 02/11/2014 – Toriteny